बिहेमा यसरी फैलियो कोरोना ! ७ जनाको ज्यान लियो जो बिहे समारोहमा गएकै थिएनन् – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाजबिहेमा यसरी फैलियो कोरोना ! ७ जनाको ज्यान लियो जो बिहे समारोहमा गएकै थिएनन्
काठमाडौं। बिहेमा धेरै मानिसहरुको भीडभाड हुन्छ । यस्तो भीडभाडमा मानिसहरुको नजिकको सम्पर्क धेरै हुने भएकोले कोरोनाभाइरस फैलिने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ । विश्वभरी अधिकांश सरकारहरुले यस्ता समारोहमा सकेसम्म कम मानिस सहभागी हुन दिशानिर्देश जारी गरेका छन् । यस्तै एउटा बिहेको अहिले चर्चा भइरहेको छ जसबाट १ सय ७७ जनामा कोरोनाभाइरस फैलियो र ७ जनाको ज्यान गयो । तर, यो बिहेमा केवल ५५ जना सहभागी भएका थिए ।यो घटना अमेरिकाको मेन राज्यको हो ।
राज्यको एउटा सानो शहरमा यो बिहे आयोजना गरिएको थियो । यो बिहेमा कोरोना फैलिएको अध्ययन अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक संस्था सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एण्ड प्रिभेन्सनले गरेको हो । सीडीसीको रिपोर्टअनुसार बिहे ७ अगष्टमा आयोजना गरिएको थियो ।भोलिपल्ट बिहेमा सहभागी एक व्यक्तिमा कोरोनाको लक्षण देखियो । त्यसपछि परीक्षणको क्रममा बिहेमा सहभागी ५५ जनामध्ये २७ जना संक्रमित पाइए ।बताइएअनुसार बिहेमा सहभागी व्यक्तिहरुले मास्क लगाएका थिएनन् र दूरीको पालना पनि गरेका थिएनन् ।सहभागी पाहुनाहरुको शरीरको तापक्रम भने जाँच गरिएको थियो ।
बिहेपनि स्थानीय समुदायमा संक्रमणका २७ केस भेटिए र १ जनाको मृत्यु भयो । बिहेमा सहभागी एक पाहुना भोलिपल्ट आफ्ना पितालाई भेट्न गए । उनका पिता स्वास्थ्यकर्मी हुन् । उनी पनि छोराबाट संक्रमित भए र उनले जुन स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्थे त्यहाँका ३८ जना स्टाफ र अन्य व्यक्तिहरु संक्रमित भए ।उनीहरु बिहे भएको स्थानबाट १६० किलोमिटर टाढा बस्थे । यीमध्ये ६ जनाको मृत्यु भयो । यी मृत्यु हुनेमध्ये कोही पनि बिहेमा गएका थिएनन् । एक अर्का पाहुना बिहे भएको स्थानबाट ३२० किलोमिटर टाढा जेलमा काम गर्थे ।
बिहे भएको एक हप्तापछि उनीमा पनि लक्षण देखियो तर उनले जेलमा काम गरिरहे । उनका कारण १८ स्टाफ र ४८ कैदीहरुमा कोरोना फैलियो । स्टाफका परिवारका १६ जना पनि संक्रमित भए । रिपोर्टका अनुसार बिहेमा सहभागी पाहुनाको सूची या त बनाइएन या त अधिकारीहरुलाई दिइएन । यही कारण सीडीसीले कम मात्र केस पत्ता लगाएको अनुमान पनि गरिएको छ ।